Blurtooth fahalemen'ny BT izay mamela ireo mpijirika hifandray amin'ireo fitaovana eo akaiky eo | Avy amin'ny Linux
Faharefoana nambara tato ho ato ny fenitra tsy misy tariby Afaka namela ireo mpijirika hifandray amin'ireo fitaovana ny Bluetooth avy lavitra amin'ny faritra iray ary miditra amin'ireo rindranasan'ny mpampiasa.
Ny marefo, antsoina Blurtooth, dia nomena tsipiriany andro vitsivitsy lasa izay tamin'ny alàlan'ny vatan'ny indostria Bluetooth SIG izay manara-maso ny fampandrosoana ny fenitra. Ary ny blu Bluetooth ve dia hita amina fitaovana an'arivony tapitrisa eran'izao tontolo izao, manomboka amin'ny finday avo lenta ka hatrany amin'ny fitaovana IoT "Internet of zavatra".
Ny fahalemen'ny blurtooth Nahita izany ny mpikaroka avy amin'ny EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne sy ny Purdue University of Switzerland.
Amin'ny tontolon'ny teknolojia ho an'ny mpanjifa, dia matetika ampiasaina hampiasa herinaratra fifandraisana fohy ho an'ny asa toy ny fampifangaroana ny headset tsy misy tariby amin'ny telefaona.
Saingy ny Bluetooth ihany koa dia manohana ny famindrana angona lavitra kokoa amin'ny halavirana hatramin'ny zato metatra, elanelam-potoana azon'ireo mpijirika ampiasaina amin'ny alàlan'ny Blurtooth handefasana fanafihana.
Ny fahalemena dia manararaotra fahalemena amin'ny fomba fanamarinan'ny Bluetooth ny fiarovana ny fifandraisana.
Matetika, ny mpampiasa dia tokony hanaiky ny fangatahana fifandraisana alohan'ny hampifandraisina amina rafitra hafa ny fitaovan'izy ireo, saingy avelan'ny Blurtooth hofaritana izany fiarovana izany.
Satria mpijirika na olona manana fahalalana ampy hitrandrahana ny marefo afaka manamboatra rafitra maloto hanamboarana endrika fitaovana Bluetooth efa azon'ny mpampiasa nankatoavinatoy ny headset tsy misy tariby sy ny fidirana amin'ireo rindranasa alefa Bluetooth ao amin'ny masinin'ilay mpampiasa.
Miorina amin'ny fanafihana an'i Blurtooth fampiasa fiarovana Bluetooth natsangana fantatra amin'ny anarana hoe CTKD. Raha ny mahazatra, io asa io ampiasaina hanampiana fifandraisana encrypt. Saingy ny mpijirika dia afaka mitrandraka azy io mba hahazoana ny lakilen'ny fanamarinana ho an'ny fitaovana nankatoavina teo aloha, izay no ahafahana manadihady ireo teboka ara-dalàna ary manakana ny filàn'ny mpampiasa hankato ny rohy miditra.
Ny faran'izay tsy misy tariby amin'ny Bluetooth dia mampihena ny fandrahonana ateraky ny fahalemena. Ireo fanontana roa an'ny teknolojia voadona, Low Energy ary Basic Rate, dia manohana ny fifandraisana amin'ny halavirana hatrany amin'ny 300 metatra. Saingy ny fanohanan'ny besinimaro an'ireo fanontana Bluetooth roa amin'ny fitaovan'ny mpanjifa ireo dia midika fa maro ny terminal mety ho mora tohina.
Ny vatan'ny indostria ho an'ny Bluetooth SIG dia nilaza fa ny sasany amin'ireo fitaovana mampiasa ny kinova Bluetooth 4.0 ka hatramin'ny 5.0 no voakasik'izany. Ny kinova farany 5.2, izay mbola tsy nohajaina be dia be, dia toa tsy mora tohina, raha ny andiany 5.1 kosa dia manana endri-javatra namboarina izay ahafahan'ny mpanamboatra fitaovana manakana ny fanafihana Blurtooth.
Amin'ny alàlan'ny fiarovana, Bluetooth SIG Nilaza izy fa "mampita marobe" ny antsipirian'ny fahalemena amin'ireo mpanamboatra fitaovana hanafainganana ny valin'ny indostria. Ny vondrona dia "mandrisika azy ireo hampiditra haingana ireo patch ilaina." Tsy mbola fantatra mazava ny fotoana hisian'ny patches na ny fitaovana mila azy ireo.
Ny Bluetooth SIG dia namoaka izao fanambarana manaraka izao tamin'ny zoma:
Te hanome fanazavana kely momba ny fahalemen'ny BLURtooth izahay. Ny fanambarana ampahibemaso voalohany an'ny Bluetooth SIG dia nanondro fa ny faharefoana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitaovana mampiasa kinova 4.0 ka hatramin'ny 5.0 an'ny famaritana Bluetooth lehibe.
Na izany aza, namboarina izao mba hanondroana ny kinova 4.2 sy 5.0 fotsiny. Ary koa, ny fahalemen'ny BLURtooth dia tsy misy fiatraikany amin'ny fitaovana rehetra mampiasa ireo kinova ireo.
Raha te hisokatra amin'ny fanafihana izy, ny fitaovana iray dia tsy maintsy manohana ny BR / EDR sy ny LE miaraka, manohana ny derivation key, ary mampiasa ny lakilen'ny peering sy ny tombo-kase amin'ny fomba manokana. Ny vahaolana amin'ity olana ity dia voalaza ao amin'ny Bluetooth Basic Specification 5.1 ary taty aoriana, ary ny Bluetooth SIG dia nanoro hevitra ireo mpikambana manana vokatra marefo hampiditra an'io fanovana io amin'ny endrika tranainy kokoa, raha azo atao.
Farany dia voalaza fa ny mpampiasa dia afaka manara-maso raha nahazo patch ho an'ny fanafihana BLURtooth ny fitaovany amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny firmware sy ny rafi-pamoahana ny rafitra miasa raha CVE-2020-15802.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Blurtooth fahalemen'ny BT izay mamela ireo mpijirika hifandray amin'ireo fitaovana eo akaiky eo
GameMode 1.6 dia efa navotsotra ary miaraka amin'ny fanatsarana ny fitantanana fitadidiana